Igbe nkwakọ ngwaahịa Wooden maka igbe steak-BAM.
Igbe nkwakọ ngwaahịa osisi maka steak
Igbe nri Pine Osisi igbe
Osisi Osisi maka nri
Igbe osisi nwere eji emepe emepe
Na-achọ igbe pụrụ iche iji kechie steaks ndị ahụ dị ụtọ. Nke a bụ igbe igbe nri pine maka ịkwakọ ngwaahịa nri. Ezubere igbe osisi a maka nri ka ọ dị mkpa iji hụ na ihe oriri gị na-atọ ya ụtọ otu ọ masịrị ya tupu itinye ya n’ime igbe. Akụkụ kachasị mma banyere igbe ahụ bụ na igbe osisi nwere oghere na-eme ka ị nwee ike iwepụ ngwongwo gị ngwa ngwa na-enweghị mkpa imeghe ya kpamkpam. Nwere ike tinye ọnụ n'ime ihe echekwara n'ime ya site na naanị ibugharị mkpuchi ya ntakịrị. Ekwesighi ileghara ihe okike a di egwu anya.
Nwekwara ike iweta igbe osisi pine a mara ọkwa nye onye hụrụ n'anya ịnata onyinye pụrụ iche. Kpoo ndị ọbịa gị obi ụtọ site na imeju ihe ndị a kachasị amasị gị ma debe ya n'etiti tebụl. Kpori ya obi na-amasị gị. Greatzọ kachasị mma iji gosi na ị nwere uto dị mma.
Enwere ike iji igbe nnabata igbe a dị egwu dịka igbe mkpọ igbe dịkwa ka ejiri ya na nchekwa, igbe onyinye, igbe mbata, igbe igbe kọfị kọfị, igbe ịchọ mma ekeresimesi, igbe onyinye desktọọpụ, igbe igbe, igbe igbe na igbe ndị dị mkpa, Kandụl ndị a hụrụ n'anya, igbe ihe ndozi, igbe agbamakwụkwọ, Igbe agbamakwụkwọ, igbe na-agba mmiri, igbe igbe na-esi ísì ụtọ. Igbe igbe!
Used nwetụla mgbe ị na-etinye igbe e ji osisi rụọ? Ọ bụrụ na ọ bụghị, oge agaghị. Nweta igbe osisi a na-ewu ewu maka nri ma gbakwunye otu ihe na-atọ ụtọ na nchịkọta crockery gị. Igbe osisi a pụrụ iche ga - eme ka ọdịdị kichin gị ma ọ bụ tebụl dị elu dịkwuo elu, ebe ị ga-edebe ya. Na, ọ bụkwa nnukwu ụzọ iji ju mmadụ anya. Nye ya ndị ị hụrụ n'anya onyinye ma mee ka ha nwee obi ụtọ. Otu dịkarịsịrị ịchọta. Ọ dị mfe iji ma dị mfe nha. Achọghị nlekọta ọ bụla.